इन्सुलेट रड: प्रकार, वर्णन, पद
Electricians - सबैभन्दा खतरनाक पेशों को एक। सबै भन्दा राम्रो कर्मचारी सुरक्षाको लागि, कम्पनी बिजुली चाप विरुद्ध सुरक्षा यसको काम लुगा र जुत्ता प्रदान गर्दछ। यो अझै पनि जारी द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) र व्यावसायिक बिजुली उपकरण। विशेष ध्यान तनाव अन्तर्गत र ऊंचाई मा काम गर्न भुक्तानी भएको छ। विरुद्ध बाधा गुण यो अतिरिक्त काम उपकरण प्रदान गर्न बिजुली चाप। यी harnesses, सीढी, चटाई समावेश गर्नुहोस्। जो PPE र उपकरण गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ चासो को उपकरणहरू को एक इन्सुलेट रड छ।
यो के प्रदर्शन गर्छ? उपकरण को यस प्रकार संग भोल्टेज तर 550 केभी अधिक छैन अन्तर्गत हो कि बिजुली व्यवस्था काम गर्न अनुमति दिन्छ। कार्यक्षमता आधारमा, यी उपकरण दुई मुख्य प्रकार मा विभाजित छन्। त्यहाँ परिचालन र नाप्ने छडी हो। आफ्नो सुविधाहरू हामी यस लेखमा पछि हेर्न हुनेछ।
उपकरण जो तीन खण्डहरूमा विभाजित गर्न सकिन्छ एक बाला छ। यो ह्यान्डल, इन्सुलेशन, साथै काम भाग। को बिजुली लागि यस्तो उपकरण पूर्वनिर्मित वा दूरबीन गर्न सकिन्छ। घर - प्रदान लिङ्क युग्मन को बलियो इन्सुलेट तत्व। यो उद्देश्य लागि एक विशेष धातु फास्टनरों प्रयोग गर्न सक्छ, तर आफ्नो कुल लम्बाइ इन्सुलेट भाग को लम्बाइ पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन।
टिप धातु वा एक ढांकता सामाग्री बनेको संचालन र, उद्देश्य आधारमा फरक फारम र कार्यक्षमता हुन सक्छ।
को इन्सुलेट भाग बिजुली सञ्चालन नगर्ने सामाग्री बनेको छ। उदाहरणका लागि, यो कठिन रबर, Bakelite, काठ र अरूलाई हुन सक्छ। प्रविधिलाई अनुसार तिनीहरूलाई सन वा सन तेल मा राम्ररी जोश, सुकेको। त्यसपछि, माथि सामाग्री भित्र चिस्यान को प्रवेश विरुद्ध रक्षा गर्न इन्सुलेट वार्निश संग लेपित छ।
को ह्यान्डल गर्ने इन्सुलेट भाग जस्तै सामाग्री देखि अक्सर गरिन्छ। यी अंश बीच स्टप घन्टी हातमा र इन्सुलेट भाग संग सम्पर्क रोक्छ जो प्रबन्ध हुनुपर्छ। को सीमक कम्तिमा दस मिलिमिटरमा सेवा र कम तीन भन्दा मिलिमिटरमा एक उचाइ हुनुपर्छ।
राज्य मानक नम्बर 20494-2001 ( "लाठी र पोर्टेबल earthing को परिचालन तत्व इन्सुलेट - प्राविधिक निर्दिष्टीकरण") को पट्टी को कुल लम्बाइ काम गरे जो विद्युत स्थापना, को भोल्टेज मा निर्भर गर्दछ।
मा voltages संग प्रणाली 350 भन्दा केभी उपकरण पकड दुई Electricians काम गर्न उपकरण प्रयोग।
एक व्यक्ति लागि उपकरण को वजन आठ किलोग्राम भन्दा बढी छैन। नाप्ने छडी लागि एक हात मा शक्ति 160N अन्य प्रजाति लागि, 80H नाघ्नु हुँदैन। को इन्सुलेट भाग र ह्यान्डल को लम्बाइ GOST 20494-2001 अनुसार, भोल्टेज को परिमाण मा निर्भर गर्दछ।
पट्टी को माध्यम द्वारा तनाव अन्तर्गत काम कार्यान्वयन बन्द विद्युत प्रणाली मा बाहिर गर्न सकिँदैन, वा सडक मा, तर सुक्खा मौसममा। कुनै मामला मा वर्षाको, हिउँ मौसम भिजेको वा कुहिरो समयमा, यो उत्पादन प्रयोग गर्न सक्दैन। यस्तो मौसम अवस्थामा, त्यहाँ बिजुली आघात, जो केही अवस्थामा घातक परिणाम निम्त्याउन सक्छ को एक उच्च जोखिम छ।
यस उपकरण संग disconnectors संग संचालन प्रदर्शन, सेट dischargers शक्ति रेखा र substations मा छुट्टयाएर जाँच वस्तुहरू फ्यूज को परिवर्तन, ओभरले पोर्टेबल earthing, घाइते व्यक्ति बिजुली वर्तमान देखि जारी एक माध्यम रूपमा प्रयोग गरिन्छ नाप्ने सञ्चालन उत्पादन उत्पादन।
यसलाई विस्तार र प्रत्येक प्रजाति को संशोधन को संभावना अधिक विचार गर्नुपर्छ।
त्यहाँ कोर कार्यक्षमता को चार प्रकार छन्:
थानेदार (परिचालन इन्सुलेट)। यो एक प्रतिस्थापन टाउको द्वारा काम एक ठूलो संख्या लागि प्रयोग गरिन्छ। विद्युत प्रणालीमा लागू अप 220 केभी एसी वा डीसी गर्न voltages।
एससीओ (उद्धार)। यसलाई 110 केभी गर्न voltages संग आघात क्षेत्र बाट व्यक्ति उद्धार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। रिलीज द्वारा बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरु सिकार पुनर्जीवित गर्न संभावना बढ्छ।
शो (विश्वव्यापी इन्सुलेट रड)। विद्युत प्रतिष्ठानहरु समान थानेदार प्रयोग। प्रतिस्थापन काम भाग अधिकतम नम्बर कार्यक्षमता बढ्छ।
SHZP (जमीन ओभरले)। पनि 220 केभी एसी वा डीसी गर्न भोल्टेज अप बिजुली प्रतिष्ठानहरु मा प्रयोग। यो दृष्टिकोण अवशिष्ट भोल्टेज वा आंशिक विच्छेदमा स्थापना संग अंश गर्न मिलाइएको अनुमति दिन्छ। SHZP काम गरेर एकदम विद्युत झटके को संख्या कम गर्छ।
रड शीघ्र तपाईं तनाव अन्तर्गत आवश्यक काम गर्न अनुमति दिन्छ। यो विद्युत आयत को जोखिम तिरस्कार गर्छन्। मुख्य कुरा - संचालन, निरीक्षण र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को परीक्षण को नियम पालन गर्न।
एक छुट्टै स्थिति अछूता संडसी प्रदान गर्न छ। तत्व 1 केभी र माथि विद्युत प्रतिष्ठानहरु मा फ्यूज को प्रतिस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरूले पनि 350 केभी गर्न प्रतिष्ठानहरु अप मा टाउको, बाड को हटाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। यस सम्बन्धित काम टाउको संग, उपकरण परिचालन सार्वभौमिक रड यस प्रकारको प्रतिस्थापन दिनुभयो।
यो उपकरण को आकार र वजन एक व्यक्ति को लागि एक आरामदायक काम सुनिश्चित गर्नुपर्छ। को इन्सुलेट भाग र ह्याण्डल ढांकता र रह्नुहोस, antistatic गुण भएको सामाग्री को निर्माण गर्नुपर्छ।
कण आफूलाई बिजुली इन्सुलेट सामाग्री वा धातु बनेको हुन सक्छ। इस्पात ऊन मा तेल-प्रतिरोधी ट्यूब थकित गर्नुपर्छ काम मा कारतूस को सतह बिगार्न छैन।
अछूता संडसी को लम्बाइ साथ पनि भोल्टेज निर्भर छन्:
450 मिमी, को ह्यान्डल - - 150 मिमी 1-10 केभी इन्सुलेट खण्ड लम्बाइ एक भोल्टेज मा।
750 मिमी, को ह्यान्डल - - 200 मिमी 10-35 केभी को इन्सुलेट भाग को लम्बाइ एक भोल्टेज मा।
यो व्यावसायिक शक्ति प्रयोग गरेर यो कूदता, निर्धारण गर्न सम्भव छ भोल्टेज ड्रप सामान्य सञ्चालन मोडमा स्थित विद्युत स्टेशन मा। भोल्टेज surges नाप्ने द्वारा सम्पर्क वा प्रत्यक्ष तापमान मापन प्रयोग: त्यहाँ दुई विधिहरू छन्।
नाप्ने टाउको एक स्पार्क गैप, प्रयोगशाला मा रूपबाट छ। यो न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य सेट गरिएको छ। को स्क्यान अंशमा समानान्तर जडान मार्फत काम टाउको, संकेतक को माध्यम ले, उपस्थिति वा भोल्टेज को अभाव देखाउँछ। यो बिजुली स्थापना नियन्त्रणमा समयमा सामान्य सञ्चालन मोडमा छ कि महत्त्वपूर्ण छ।
त्यहाँ तीन मुख्य प्रकार हो:
IDCs। यो यन्त्र जो सबैभन्दा सही डाटा माप प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ, को इलेक्ट्रोड बीच दूरी परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
शि। यस्तो उपकरणहरू मा सूचक 160 megohms गर्न थप प्रतिरोध संग microammeter स्थापित। मापन विधि आधारमा, यो टर्मिनलहरु जोडिएको छन् तार संग काम क्षेत्र जांच किरा मा परिवर्तन। को नियन्त्रण विसंवाहक लागू जांच, एक समानान्तर जडान छैन। Microammeter तीर मापन को परिणाम देखाउँछ।
शि दोस्रो विधि लागि प्रयोग उपकरण। सम्पर्क को तापमान नाप्ने लागि माउन्ट जांच।
विद्युत संडसी। यो विभाजन चुम्बकीय सर्किट संग एक वर्तमान ट्रांसफर्मर छ। को मापन वर्तमान प्रयोग गरिएको प्राथमिक घुमावदार सञ्चालकको र बन्द एक माध्यमिक लागि नापन वा डायल वा डिजिटल।
को इन्सुलेट पट्टी वातावरण मा एक तापमान शासन संग 25 ° सी मा 98% को एक सापेक्षिक आर्द्रता मा देखि प्रयोग गर्न माइनस 45 ° C गर्न प्लस 40 ° C
उपकरणहरू प्रयोग नगर्नुहोस्:
प्रासंगिक प्रमाणपत्रहरू सुरक्षा स्तर पूरा नगर्ने, क्रमशः छैन, र परीक्षण पार गरेनन्।
खराब। यस्तो उपकरणहरू मरम्मत हुनुपर्छ। त्यसपछि परीक्षण गरे। केवल डाटा उपकरण थप प्रयोग वा निपटान मा निर्णय प्राप्त।
चिस्यान। भिजेको मौसममा।
अपरेसन नाप्ने लागि समर्थन (सीढी) को प्रयोग संग।
उपयुक्त tolerances संग विद्युत प्रणाली अनुमति कामदारहरूको काम गर्न। प्रत्येक कर्मचारी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को एक पूरा सेट संग सुसज्जित हुनुपर्छ इन्सुलेट पन्जा, इन्सुलेट जूता, बिजुली चाप, चश्मा र respirator विरुद्ध सुरक्षा संग वस्त्र सहित। यो सबै बिजुली झटके देखि कामदार सुरक्षा गर्न सकेसम्म धेरै मदत गर्नेछ।
इन्सुलेट रड काम अघि आवश्यक एक दृश्य निरीक्षण गर्न subjected हुनुपर्छ। एक दोष पत्ता लगाउने को घटना अर्को उदाहरण द्वारा प्रतिस्थापित हुनुपर्छ।
सञ्चालन गर्दा यांत्रिक परीक्षण बाहिर थिए। एक निर्धारित र unscheduled ड्रप उपकरण मा सञ्चालन हुन सक्छ कमजोरीको लगािन्छ। पूर्व उपकरण मर्मत गर्न subjected छ।
विद्युत स्थापना कार्य भएकोले कठोर निरीक्षण र नियन्त्रण गर्न subjected बिजुली लागि खतरनाक उपकरणको कोटीमा पर्छ। यसबाहेक, कारखाना मा उपकरण आधारमा परीक्षण गरिन्छ। GOST 20494-2001 अनुसार, तिनीहरूले हुन सक्छ:
स्वीकृति। प्रत्येक उत्पादनको लागि बाहिर।
Periodicals। यो प्रत्येक रड विषय हुनुपर्छ।
विशिष्ट। छानेर नै प्रजाति तीन नमूनाहरू परीक्षा सञ्चालन गर्छन्। यो परीक्षण को सबै प्रकार पूरा गर्न आवश्यक हुनेछ।
सबै परीक्षण घटनाहरू सहिष्णुता को एक निश्चित स्तर र प्रशिक्षित र प्रमाणित गर्ने विशेष प्रशिक्षित मान्छे को मद्दतले कारखाना उत्पादन गर्छ। यी अपरेसन एक समय तरिका प्रदर्शन हुनुपर्छ, यो जीवन र स्वास्थ्य बिजुली को सुरक्षा असर गर्छ।
परीक्षण को सूची:
दृश्य निरीक्षण। प्याकेज, लेबलिंग र प्याकेजिङ्ग जाँच गर्दै। आवश्यक कागजात र सुरक्षा को सान्दर्भिक प्रावधान लागि जाँच गर्दछ।
कारखाना रेखाचित्र जाँच गर्नुहोस्। को मद्दतले उत्पादन नापन मापदण्डहरू पूर्ण संयोग हुनुपर्छ।
ढांकता बलको प्रमाणिकरण। पाँच मिनेट भन्दा अधिक द्वारा व्यावसायिक आवृत्ति एसी एकल आवेदन एक भोल्टेज उत्पादन। जब 1/3 मान यो भोल्टेज वृद्धि मनपरी हुन सक्छ। थप वृद्धि सहज हुनुपर्छ। काम जाँच र स्टेम को इन्सुलेशन। यदि पूर्ण मापन खण्ड, चेक रड खण्डहरूमा को त्यसपछि यो भाग परीक्षण गर्न कुनै मौका छ। breakdowns, ढांकता हानि द्वारा स्थानीय ताप, सतह निर्वहन पत्ता भने, यो उत्पादन सफलतापूर्वक परीक्षण पारित गर्ने मानिन्छ।
तन्यता परीक्षण। फलामको डण्डाले एक अन्त लोड मार्फत अन्य, निश्चित छ वा सामान उचाल्ने यंत्र अधिकतम लोड गर्न subjected छ। परीक्षण कुनै देखिने क्षति संग सफलतापूर्वक पूरा भयो।
परीक्षण झुकन। उत्पादन तेर्सो गार्ड घन्टी र ह्यान्डलहरू को अन्त मा दुई अंक मा तय गरिएको छ। कुनै देखिने क्षति भने रड नमूना परीक्षण बित्यो।
हात मा सबैभन्दा ठूलो प्रयास जाँच गर्दै। तेर्सो रड दुई डट्स संग सुरक्षित निश्चित - सामने (गार्ड घन्टी देखि 50 मिमी) र पछिल्लो (को ह्यान्डल अन्त देखि 50 मिमी) समर्थन गर्दछ। अगाडि समर्थन र आंकडा मा मीटर 160N नाघ्न हुँदैन। 1000V परीक्षण गर्न रड अप इन्सुलेट यो दृश्य उजागर छैन।
परिणाम नकारात्मक छ भने, यो नमूनाहरू को एक ठूलो संख्या संग दोस्रो प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। डाटा दोहोर्याइएको छ भने, उत्पादनहरु को सबै प्रकारको जफत, र ठेगाना लगान र नकारात्मक संकेतक को कारण निर्मूल गर्न एक नयाँ पार्टी को रिलीज निषेधित। यस्तो अवस्थामा परीक्षण टिकट रातो मा बाहिर क्रस छ।
सबै परीक्षण वर्तमान नियमहरु अनुसार बाहिर थिए। उपकरणहरू को परिचालन परीक्षण को लागि मापन लागि, हरेक दुई वर्ष उत्पादन - एक वर्ष एक पटक।
कर्मचारी उचित उपयुक्त PPE उपकरण प्रदान गरिएको थियो लागि, सान्दर्भिक राष्ट्रिय स्तर र मान्यता पनि जाँच्न गर्नुपर्छ। यो काम प्रत्येक प्रकार को लागि सही प्याकेज चयन गर्न मद्दत गर्नेछ।
को इन्सुलेट रड मूल्य स्थापित उपकरण छान्ने उपभोक्तालाई लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। औसत मा 500 rubles छ। तर सस्तो उपकरणहरू Chase छैन। ध्यान विचार गर्नुपर्छ ग्यारेन्टी निर्माता र तिनीहरूलाई दिइएको कागजातहरू - कारखाना। सबै उत्पादनहरु पूर्व-बिक्री परीक्षण पास र उपयुक्त टिकट हुनुपर्छ।
निष्कर्ष मा, म आधुनिक संसारमा बिजुली बिना आफूलाई कल्पना गर्न सक्दैन भनेर याद गर्न चाहन्छु। त्यसैले, छड नाप्ने बिना दिइँदैन गर्न सकिन्छ। यो संसार बिजुली आपूर्ति बन्द भने हुनेछ के कल्पना गर्न कठिन छ। सायद त्यहाँ अराजकता र आतंक आउनेछ। त्यसैले, तपाईं मान्छे स्थापना सेवा, र उपयुक्त अधिकारीहरूले ठूलो श्रद्धाको र आदर धेरै सकेसम्म सबै आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तिनीहरूलाई प्रदान गर्नु पर्छ।
त्यसैले, हामी यो इन्सुलेट रड रूपमा प्राविधिक उपकरण हो कि फेला परेन।
घरेलू र औद्योगिक इस्त्री प्रेस। कसरी प्रेस इस्त्री चयन गर्न? इस्त्री प्रेस समीक्षा
विश्व अर्थव्यवस्था को शाखा: वैश्विक पर्यटन उद्योग मा सन्तुलित स्कोरकार्ड को अभ्यास
AVVG केबल: निर्दिष्टीकरण र डिजाइन
Switchgear एकाइ (CRU): प्रकार, विशेषताहरु, पद
घरमा रक्सी रक्सी को उत्पादन को आधुनिक प्रविधि
रंगीन, बहुमूल्य धातु र फलाम प्रजाति र आफ्नो कैरेक्टराइजेशन
पारा गरेको व्यास: को निरन्तरताले वा परिवर्तन?
यो मनोरञ्जन केन्द्र "Korogon" (Gorny Altai, Chemal जिल्ला): विवरण, समीक्षा
कहिले र Brunettes कसरी मनाउन सक्नुहुन्छ
रूसको सेना उड्डयन: इतिहास, विदेशी एनालॉगहरूको तुलनामा
म विवाह मा आकर्षित गर्न आवश्यक छ?
कसरी समय को प्रकृति, मानिसको अस्तित्व छ। मानव गतिविधिहरु को विनाशकारी नतिजा
तालिका पूर्णता जूता। जूता को पूर्णता कसरी निर्धारण गर्ने?
सुनगाभा: सही ढंगले फूल पानी कसरी
पुखराज संग सुन र चाँदी कान को बाली (फोटो)
Aleksandr Erokhin - एफसी को मिडफिल्डर "Rostov"
सफारी पार्क क्रिमीआ (फोटो) मा "taigan"